Ac Fan, Ac Kutonhora Fani, Ec Fani, Dc Kutonhora Fani, Ac Axial Fani - Inokurumidza
SD02007 Yakakwira Hunhu 20x20x7mm axail Fan 12V 5 ...
SD09232-1 92mm 12v 24v 48v dc feni injini 9232 90 ...
SA22580-1 230V AC Isina Simba Industrial Ventilat ...
Wholesale fekitari 100% Fan
High Performance Fan Sezvakaita Ac - SA18060 indust ...
Isu takazvipira kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kuita kwepamusoro, mhando yakatendeka uye yemitengo yezvinhu kune vese vatengi vedu.
Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura chiziviso chekuchengetedzwa kwenyika dzakawanda munyika dzakasiyana siyana nematunhu akadai se: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS, nezvimwe.
Parizvino, pane vashandi vanopfuura mazana maviri, nzvimbo yemuti iri zviuru mazana masere emamirimita, uye kugona kwegore negore kunenge zviuru zvitanhatu zveKPCS.
Speedy inogara ichiteerera kune vatengi vayo kuti irambe ichivandudza, kugadzira, uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva.
Shenzhen Speedy Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2003. Ikozvino yave muKuvaka 6, Juntian Industrial Zone, Shahu Village, Pingshan Town, Pingshan New District, Shenzhen. Gungano uye chigadzirwa chekutengesa chigadzirwa chine nzvimbo inopfuura zviuru gumi zvemamirimita uye vashandi vanopfuura mazana mana. Kambani manejimendi yapfuura ISO-9001 (2008) yenyika dzese mhando manejimendi manejimendi system system.
Iyo kambani inoshanda mukugadzira DC mafeni anotonhorera, maAcc kutonhora mafeni, uye macomputer ma radiator. Chigadzirwa chakakodzera zviridzwa, michina uye zvishandiso, komputa CPU, chassis magetsi uye kadhi remifananidzo rinoda kupisa kupisa kana kufefetedza. Zvigadzirwa zvakapfuura maRohs, CE, UL, CUL, TUV, FCC, CCC, CQC uye zvimwe zvitupa, uye zvigadzirwa zvinotumirwa kumusha nekune dzimwe nyika.
Kudzora kwemhando yepamusoro uye kugadzirwa kwechigadzirwa ndiyo nheyo dzeiyo Speedy bhizinesi modhi. Speedy inogara ichiteerera kune vatengi vayo kuti irambe ichivandudza, kugadzira, uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva. Isu takagara takagadzirira kupa mhinduro dzakanakisa dzekutonhodza kune vese vatengi.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti isu hatisi kukurukura mafekitori mafeni ezve zvigadzirwa zvakagadzirwa (senge kutonhora uye kufefetedza ...
Fan yeEC chigadzirwa chitsva muindasitiri ye fan. Izvo zvakasiyana nevamwe vateveri veDC. Iyo haingogona chete kushandisa DC magetsi magetsi, asi zvakare AC voltage p ...
1. Kushanda musimboti: Iyo inoshanda musimboti yeiyo DC inotonhorera fan: kuburikidza neDC voltage uye yemagetsi induction, magetsi simba anoshandurwa ...
12cm Ac Axial Fan, Plastiki Fan Guard, Hvac Fan Anodhonza, Metal Grill Fan 80mm Chengetedza, 172mm Ac Axial Fan, Simbi fan fan,